T-rex - pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Ny mahavariana ny "dinosaurs" dia mahagaga tokoa eo amin'ny ankizy. Izany dia mety vokatry ny fahitana fa lany tamingana an-tapitrisany taona ity karazana ity ka "tsy azo tsapain-tanana" ho azy ireo.
Inona no tena mampientanentana an'ireto biby goavam-be voalohany ireto?
Mbola nifandray tamin'ny dinôzôro ihany ny ankizy ary ny sasany mahita ireto biby "mampihoron-koditra" ireto - toa ny T-Rex (Tyrannosaurus rex) - tena mahaliana.
Inona no tena mahavariana momba ny dinôzôro? Sary avy amin'i Bianca Carretto avy ao amin'ny pixel
Ny ray aman-dreny tanora dia mety mbola mahatadidy ireo sary miaina avy amin'ilay andian-dahatsoratra hoe "In a Land Before Time", izay ahitana karazana dinôzôro isan-karazany matetika mila miady mafy mba ho tafavoaka velona. Nisy, ohatra, ilay mpilalao malaza mampihomehy "Littlefoot", Brontosaurus izay nanana traikefa nahafinaritra vitsivitsy niaraka tamin'ny namany "Ducky" (Saurolophus), "Petrie" (Pteranodon), "Spike" (Stegosaurus) ary ilay Cera (Triceratops) somary bitika nandà tsy nahomby. Ity sarimihetsika sarimihetsika ity dia ahitana sarimihetsika 14. Tamin'ny taona 2007, nisy andiany 26 misy an'io anarana io ihany no tonga tamin'ny fahitalavitra, izay ny mpilalao sarimihetsika tamin'izany fotoana izany dia efa olon-dehibe ankehitriny ary tsy maintsy miatrika ny fiainany. "Dinozoro mahaliana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 19. Desambra 2020 19. Desambra 2020 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords Dinos Dino. TRex, dinôzôro, T-RexLeave a Comment momba ny fahalianana amin'ny dinôzôro